Ogaden News Agency (ONA) – Dagaalo badan oo maalmihii la soo dhaafay lagu qaaday cadawga
Dagaalo badan oo maalmihii la soo dhaafay lagu qaaday cadawga
Wararka nagasoo gaadhay Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo ka dhacay wadanka Ogaadeeniya. Dagaaladaasi ayaa waxay u kala dheceen sidan;
26/09/2012 Deegaanka lagu magacaabo Garasley oo katirsan Dagamada Dhuxun weerar ay NH/CWXO ku qaadeen fadhiisin gumaysigu ay ku lahaayeen deegaankaasi ayaa waxaa Askarta gumaysiga madow lagaga dilay weerarkasi 4Askari waxaana lagaga dhaawacay 5kale.
28/09/2012 Deegaanka lagu magacaabo Xamuurka oo Fiiq katirsan weerar mar ah oo lagu qaaday askar gumaysi oo deegaankaasi ku sugnayd ayaa waxaa lagaga dilay 1Askari waxaanal gaga dhaawacay 1kale.
27/09/2012 Hud-xagar oo isna Fiiq katirsan dagaal halkaasi ka dhacay ayaa waxaa askarta gumaysiga loogu gaystay khasaare lixaadle.
Waxay kaloo ay NH/CWXO ku qaadeen weeraro kala duwan ciidanka mooraalka jabsan ee gumaysiga Itobiya. Dagaaladaa oo khsaaraha soo gaadhay cadawga aan weli la soo faafaahin ayaa waxay kala dhaceen Taariikhaha kala ah 17,18,19,20, 21,22,24,27, iyo 28/09/2012. Dagaaladaa ayaa ka dhacay degaanada kala ah;
1-Dhuure oo Q/dahar katirsan, 2-Towrada oo Sagag udhow, 3-Jalaeelo oo katirsan dagmada Shiilaabo, 4-Golo- obore,5-Sanka dhana,6-jiicdabayle iyo 7-Duudsarmaan oo dhamaantood u dhow deegaanka Birqod, 8-Sanmadoobe oo Garbo kartirsan, 9-Labiguduud oo Isku-dhoonley u dhow, 10-Aw-nuur oo Dhagaxbuur katirsan, 11- Kadowga oo dagmada Fiiq u muuqata, iyo 12-Duudxagare iyo 13-Xamuurka oo Fiiq kawada tirsan.